Dhamsa Warrqsa Libya
Oromoo Oromiyaa irratt mirga dhabsiisuuf diinni eenyummaa isaan akka ummata walaba tokkoott qaban haquun Oromiyaa irratt abbumaa saanii haaluu fedha. Garuu jagnooti Oromoo bilisummaa dheebotan gaarreenii fi sululoota biyya abbaa saanii keessaa lafa raasaa jiru. Diinni ilkaan raafame buqqisuu malee fala hin qabne. Garuu sana eenyutu shaffisaan godha? Caalaan dhaabotaa malbulchaa maqaa Oromoo dhahatan Oromiyaa keessatt hojiin silaa irratt xiyyeeffachuu malan irraa maqa jiru. Ugganii waan labsatan hojiirra oolchuu utuu hin ta’in waamicha “tokkummaa, walitt baquu, walii tumsuu”jedhu tarrisaa ooluuf waan umaman fakkaata. Akeeki sagantaa malbulchaa saaniin labsame hariiroo ambaa qofaa jedhameetu. Kanaafi afaanii fi hojii saanii gidduu walfincilli kan mullatu. Kanaafi Wayyaaneen bitintiraa jirtu kan silaa duri gaggeeffamtu badisa hin eegamne kan geessisaa jirtu. Nuti eenyu, eessaa kaanee eessa geenye, eessatt qajeeluuf jirra? jennee wal yaadachisuu nuffuu hin qabnu. Oromoon dame Kuusaa keessaa tokko. Kuusaan isa caalaa dullacha yoo hin taane ulumaa dhaloota qarooma ilmoo namaa dullachoota keessaa tokko. Mamii tokko malee qaroommi Oromoo lata qarooma sanaati. Yeroo waa’een Oromoo dubbatamu yoo hiddi qarooma dullacha kanaa waliin qabu, qacceen saa ammalee keessaa mullatu, hin dhahamne guutuu hin ta’u. . Mallattooti Abbooliin Gadaa badisa irraa oolan dhimma itt bahanii fi hoodi saanii horcowii shakala qaroomicha bakka hedduu badanii. Sun Oromoof qaabachiisaa karaa fagoo seenaa keessaa imalanii fi haalama, ganamaa fi hamaa isaan mudateetii. Seenaa dureessa kan Oromummaa, barbaacha lafaa, eenyummaa, ofiinbulummaa fi birmadummaaf qabsiisuu.
Mootummaan Kuusaa Barabra ture erga kufee booda qunnamtiin dameelee gidduu ture kan cite fakkaata. Tarii, yero sana ta’a Oromoon misooma addaa eegalee sirni Gadaa sirna bulcha Kandaasee bakka bu’uun faara goddinaa kan mullisuutt kan ka’ee.. Sochiin Oromoo gara kibbaatii jalqabe baqqaana baha Afrikaa kaabaa kibbatt faana dhahamu of duubatt dhiiseera. Godaansa gara kibbaatt godhame irratt Oromdur bakka bakkatt qubachiifaman hanga raayyaan Oromoo jabaatee ijaaramuun jaarraa 16faa keessa birmatuufitt garri tokkoon saanii humnoota empayera Habashaa fi Adaaliin dhuunfatamanii turani. Yeroo sana Oromummaan sadarkaa olhaanaatt guddachuun diinota kan rommisiise. Booda garuu dhiibbaa alaa fi keessaan aaboon Gadaa laaffataa dhufe. Dhumarratti, Gadaan, keessaayyuu akka dhaaba malbulchaatti jalqaba jaarraa 20ffaa keessa koloneeffatan raawwachiifame. Oromummaanis haleellaa jala seenee hanga 1960mootaatt dandamachuu hin dandeenye ture.
Dhaaboti Oromoo hedduun akka “Daldaloota Ayyer Bayyer” jedhamaniiti (abba tokkee hin homishnee fi gibira hin baafne). Jarri akkasii kanneen homishanii fi raabsan waliin wal argaa hin qabani. Bakka qubatan waan hin qabneef qilleensaa qilleensa irraatt waamicha tumsaa milkaawullee dhimma hin baafne tolchaa oolu. Hobbaatiin saa kan lakkoofsaa malee kan akaakuu hin ta'u. Kanuma kaleessa waliin socho’uu dadhabne jedhantu deebisanii wal xaxuuf walwaamu. Ummati Oromoo ballaan dilga’uu malee murnota keessatt erga addaan bahani wal muuduu yoo hin taane kan jijjiirame hin jiru. Kan waamicha dhugaa gochuu barbaadu hunda dura lafa Oromiyaa irraa gocha agarsiisuu qaba. Kana malee,”carpetbaggers” (ayyaan laallatoota Amerikaa bakka waa bu’inaa jedhanii hin dhibne) waliin kan adda isaan godhu hin jiru. Wan wareegan kophaa jalqabuu hin danda’an taanaan maaf gargar bahanii? Kaayyoon ganamaa nu hin baasu Oromoof mala addaa qabna kan jedhan isatt deebinaamoo amma ejjennoo lamaan maaliin walitt araarsuuf jedhu? ABO fi kanneen kaayyoott amanan waamuu haa ta’u ABOn fi kanfakkaatan sanaaf deebii kennuun walabummaa Oromiyaatt ga’isuu ta’a.